DF oo qabqabatay ciidamo ka goostay Shiirkole
Muqdisho (Axadle) – Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa amar ku bixiyay in lasoo xiro 7 askari oo katirsan booliska degmada Hodan kuwaa oo xalay lagala baxay guriga taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Jeneraal Saadaq Joon oo Arbacadii la geeyay aagga Shirkole markii rabshadu bilaabatay.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Axadle u sheegay in ciidamadan oo deganaa agagaarka guriga General Saadaq ee Shirkole, ay jeneraalka ula yimaadeen ciidamo aad u tiro badan ayna ka qaateen taleefankiisii ​​gacanta.
Jeneraal Saadaq ayaa markaa usheegay toddobada askari in uusan diyaar u ahayn in la dilo ama hubka laga dhigo, maadaama ay ahaayeen dhalinyaro uu in badan taliyaha la soo qaatay, laakiin waxay u tageen taliyaha oo ay ka codsadeen inuu sii daayo Taliye Saadaq. Joon.
Wuxuu sidoo kale u sheegay in moobeeladooda ay ku jiraan gacmo aamin ah ayna dib u soo qaadi doonaan sababo amni awgood.
Saraakiisha ayaa la xiray iyaga oo looga shakiyay falal amniga lidi ku ah markii ay ka baxeen goob nabdoon oo aan dagaal ka dhicin. Waxaa sidoo kale lagu qabtay dagaal la’aan markii ay ku biireen ciidanka Saadaq.
Xaalada Magaalada Muqdisho ayaa hada dagan laakiin wali waxaa jira jawi rabshado ah kadib howlgaladii shalay ay sameeyeen ciidamada. Dowlada Soomaaliya ayaa tuhunsan in saraakiisha qaar oo ay rumeysan tahay inaysan diyaar u aheyn weerarka lagu qaaday Sadiiq Joon.
Xalay ayaa ahayd habeenkii labaad oo ay ciidamada dowladda isku dayaan inay weeraraan Jeneraal Saadaq laakiin wuu ku guuldareystay, inkastoo markii dambe dowladda ay sheegtay inaysan qorsheyneynin inay weeraraan General Saadaq
Jeneraal Saadaq Joon ayaa maanta bilaabay sameynta ciidan ka dhisan degmada Shiirkole si uu isaga difaaco weerarka dowladda.
AFAR Arrimood Oo Sameeyey Thomas Tuchel Oo Sabab U Noqday In Chelsea
Xiddigii Garoonka, Laacibkii U Liitay & Qiimaynta Ciyaaryahanadda Kulankii